Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji Mkpapụ ezie na-enweghị ọrụ
site Lisa Reynolds
Olee otú Iji Mkpapụ ezie na-enweghị ọrụ
Anyị na-ebi n'ụwa ebe na-enweghị ọrụ bụ elu na ọtụtụ mba niile gburugburu ụwa na-. And yet even with this quite universal problem in the lives of people there sadly still exists an ignorance and prejudice towards people who are out of work especially those who have been out of work for a while. Ma na nke a ajọ mbunobi na enweghị nghọta pụrụ ịbụ nnukwu nsogbu mgbe ọ na-abịa n'ụwa nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị.
Impressing is a keyword in the world of dating after all and that is what we are all trying to do in one way or another on a date whether it is by using our natural wit, dressing a particular way, or talking about our employment history but the trouble with this in our current economic climate is that we will get people who think we are “Spongers” or “Lazy” because we may not have had the luck they have had in finding a job. Ha ga na-arụ ụka n'ezie na ha rụsiri ọrụ ike iji nweta ọrụ ma, ihe a na otú i ya mere na ọ rida na chi ma na-arụrụ ọrụ na-eche na ị bụ nri nwa akwukwo ma ọ bụ. Ọ dịghị ihe ọzọ karịa nke. Dị nnọọ otu onye chere.
Na enweghị m ọrụ afọ anọ na nke ọjọọ akụ na ụba na ihu igwe na-Ireland ugbu a m na-egwu na-agwa onye ọ bụla masịrị m na enweghị m ọrụ maka egwu nke ihe ha ga na-eche m. But despite our fears, there are people out there who do understand what the world is like. Echetara m na-agwa a Ihọd na m hụrụ n'anya na m na-enweghị ọrụ ruo afọ anọ na ọ bụ n'ezie oyi na ya. N'ezie, he never even batted an eyelid about it and that was one of the many reasons why I fell in love with him. Ọ bụ ụdị, nghọta, ma ọ bụghị ịkatọ.
N'ezie, not all guys are like this and I wish for all men and women out there that they were. M zutere a Ihọd m mmasị na anụrụ m ya na-ekwu banyere enweghị ọrụ ndị na-unflattering ụzọ. Ị maara na mbụ snobbish kwuru dị ka "Sponger". Ya mere, ndị bụ eziokwu bụ mgbe anyị na-amasị-eche ezi-na-achọ ndị ga-abụ ndị na-abụghị ịkatọ ọ bụghị mgbe ezi. Ma ọ bụ na ike mgbe ha bụ otú kwesịrị ekwesị ha fọrọ nke nta-agbazekwa ha taa jeans!
Ọ bụrụ na ị daa na ịhụnanya na onye nwere otu ajọ mbunobi chere banyere enweghị ọrụ ndị mmadụ na gị onwe gị ma ọ bụ ndidi na-enweghị ọrụ na ọ pụrụ ịbụ nnọọ mgbagwoju ọnọdụ ịchọta onwe onye na. Ma ị na-echeta na-akwanyere onwe gị ùgwù. Nke bụ eziokwu na ị bụ ma ọ bụ na-enweghị ọrụ bụ nanị otu akụkụ nke ị. Ọ dịghị ihe ị. E nweghị odida na ya dị ka ogologo oge ị maara na ị na-agbalị gị mma.
Ị mkpa gaa na ụbọchị na gị isi ẹkenịmde elu. O nwere ike na-arụ ọrụ. Nwere ike ị gaghị. O nwere ike na-arụ ọrụ ná ndụ ya niile, ị nwere ike ọ bụghị. Ọ pụtara ihe ọ bụla. Ọ bụ nnọọ onye na ị bụ nanị otu nwoke ma ọ bụ nwaanyị ma na ị nwere ihe dị ukwuu ikike ikwu ihe na-amasị gị na-eme ihe otú ị na-amasị (Nye ọ bụ nsọpụrụ N'ezie!) na-eche dị nnọọ ka mkpa dị ka ọ na-eme n'ihi na m na-agwa gị na Mister na Missus na ị bụ!
7 Jọrọ njọ Mejọọ Women Mee-emebi ọ bụla Ohere nke a Mmekọrịta
Online dịwara Inweta Ị Down?
Gịnị Women Chọrọ na ha zuru okè Man?
Ònye na-ekwu Ị Pụghị Mee ọsọ ọsọ Ịhụnanya?